RANDRANA SENDIKALY: Nanatanteraka diabe ho fanamarihana ny 8 marsa – Madatopinfo
Politiques & économiques
Santé & Sociales
Sportives & Culturelles
ONG MERCI TSIADANA : Adidisika, serasera, fanentanana ary fifehezana ny lalanan’ny zon’ny sembana no iompanan’ny fiofanana Niainga avy amin’ny fakan-kevitr’ireo manana fahasembanana ny lohahevitra amina fampiofanana toy izao. Hoy i Holy na Holiniaina Rakotoarisoa, Filoha mpanorina sady mpitarika ny ONG Merci, raha nitafa tamin’ny Mpanao gazetinay...
FAMPILALAOVANA KILONGAN’NY AEA SY NY ONG MERCI : “Nahazo fafinaretana ireo manana fahasembanana, afapo kosa ireo hafa” Nanatanteraka fialamboly ho an’ny ankizy miisa 21 ny association enfants Antananarivo, AEA sy ny ONG Merci. Ny sabotsy 19 Jiona teo no natao izany teo amin’ny birao fiasan’ny AEA, eny...
AMBAVAHADITOKANA AMBOHIDRAPETO ANKADIMANGA : ONG Merci, miasa amin’ny fampandrosoana ifotony eny Itaosy « Fampandrosoana mampiaty eny ifotony, dingana famolavolana drafitr’asa sy tetibola mampiaty eny anivon’ny kaomina ». Io no teny filamatry ny fampiofanana an’ireo manana fahasembanana sy mpiantsehatra ary manampahefana eo anivon’ny kaominina Ankadimanga,...
TONTOLO IAINANA SY FAMPANDROSOANA LOVAINJAFY : Nananteraka aro afo ny voly hazo ireo mponin’ny Mafaijijo, Maintirano « Anio no ezaha ho vitaina ireo zanakazo tsy vita aro afo taminy fanokafana aminy fomba ofisialy tamin’ity taona 2021 ity. Nifampitaona an’ny kaominina Mafaijijo ny vatandelahy rehetra sy ny...
MADAJEUNE: Sekoly ambony manodidina ny 40 no mandray anjara etsy Mahamasina Eny amin’ny Lapan’ny tanora sy ny fanatanjahantena indray no hifamotoana ireo sekoly ambony sy ny mpianatra manana bakalorea noho mihoatra amin’ny alalan’ny hetsika lehibe izay karakarain’ny Madajeune antsoina hoe :...
RANDRANA SENDIKALY: Nanatanteraka diabe ho fanamarihana ny 8 marsa
Samy nanana ny fomba nanamarihany ny 8 marsa, andro iraisampirenena ho an’ny vehivavy ny sampandraharaha, ny fikambanana isan-tsokajiny teto amintsika. Raha ho an’ny Randrana Sendikaly manokana, niavaka ny fanamarihana izany ny alatsinainy teo. Nifamotoana ireo mpikambana vehivavy ao anatin’io fikambanana io ary nanatanteraka hetsika lehibe tamin’ny alalan’ny diabe na ny « sono mobile ». Nanomboka teo amin’ny Foiben-toerany 67 Ha izany ny maraina, avy eo nihazo an’Ankadimbahoaka, namakivaky teny Tanjombato ary nifarana tao amin’ny Fasan-karana. Araka ny fantatra, nahazo alalana ara-dalàna teny anivon’ny Prefektioran’ny tanan’Antananarivo ity hetsika ity. « Atsaharo ny herisetra atao amin’ny vehivavy », io kosa no lohahevitra nosafidian’ny Randrana Sendikaly nandritra izany. « Tanjona lavitra ezaka ny mba hiainan’ny vehivavy amin-kalalahana amin’ ny zo maha olombelona azy, ary koa mba ho ren’ny fanjakana ny antso ataon’ny Randrana Sendikaly amin’ny tokony haovana ny sonia ny Convention 190 momba ny fanafoanana ny herisetra atao eny amin’ny toeram-piasana indrindra ny vehivavy », hoy ny Sekretera Jeneralin’ny USAM Randrana Sendikaly, Mbola Nomena. Tsiahivina moa fa ny Randrana Sendikaly dia nahazo ny « Premier prix 2020 – Défenseur de Droit de l’Homme » avy amin’ny Firenena Mikambana.
FANATSARANA HATRANY IFOTONY AN’NY ZAIMAIKA : «Narodana tanteraka ny tafo vaovao noho ny rindrina mangozohozo »
M’HETSIKA MVOLA: Hanome lanja ny tanora sy ny fanatanjahantena eto an-drenivohitra
LISEA SABOTSY NAMEHANA: Misitraka ny fotodrafitrasa « biodigesteur » ny sekoly sy ny manodidina
© 2020 Copyright Madatopinfo. All Rights reserved.